अमेरिकाविरुद्ध नेपालको शानदार जीत, आज ओमनसँग भिड्दै
भाद्र २९ गते, २०७८ मगलवार
14th September, 2021 Tue ०९:३८:४८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । अमेरिकासँगको एकदिवसीय खेलमा नेपालले उत्कृष्ट जीत हासिल गरेकाे छ ।
गएराती भएकाे खेलमा नेपाल ५ विकेटले विजयी भएकाे हाे ।
नेपालमा जितमा कुशल भुर्तेतल (८४) र रोहितकुमार पौडेल (६२) ले उत्कृष्ट पारी खेले । उनले आईसीसी विश्वकप लिग-२ अन्तर्गत सिरिजमा ओपनिङ ब्याट्सम्यानको भूमिकामा एक म्याचमा सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यानको उपलब्धि हासिल गरेका छन् ।
अमेरिकाले दिएको २ सय ३१ रनको लक्ष्य नेपालले ४९ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर भेट्टायो । उनले ९३ बलमा तीन छक्का र तीन चौकासहित ८४ रन बनाए । त्यस्तै, रोहितकुमार पौडेलले पनि अर्धशतकीय पारी खेले । उनले ८७ बलमा दुई चौका र तीन छक्कासहित अविजित ६२ रन बनाए ।
एकदिवसीय क्रिकेटमा रोहितको यो लगातार दोस्रो अर्धशतक हो । उनले पीएनजीसँगको दोस्रो खेलमा पनि अर्धशतक बनाएका थिए ।
त्यस्तै, आज विनोद भण्डारीले ३७, आसिफ शेखले २३, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले १७ रन बनाए । कुशल मल्ल भने एक रनमै आउट भए ।
बलिङमा निर्सग पटेल र नोषुतोस केन्जिङ्गेले सर्वाधिक २-२ विकेट लिए । त्यसअघि, टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २ सय ३० रन बनायो ।
उसका लागि मोनाक मटेलले शतक बनाए । पटेलले ११४ बलमा एक छक्का र ९ चौकासहिचत १ सय रन बनाए ।
त्यस्तै, निर्शग पटेलले २१, करीमा गोरे, सुशान्त मोडानीले १६/१६, स्टिभन टेलरले १४, अभिषेक पराडकरले अविजित १३, नोषतोश केन्जिङ्गे, सञ्जय कृष्णमूर्तिले १३/१३ रर जसकरण मल्होत्राले ११ रनको योगदान दिए ।
बलिङमा सन्दीप लामिछाने, विक्रम सोब सुशान भारीले दुई/दुई र कुशल मल्लले एक विकेट लिए । अमेरिकाका दुई ब्याट्सम्यान रनआउटको शिकार भए ।
नेपालले एकदिवसीय क्रिकेटमा लामो समयपछि राम्रो प्रदर्शन गरेको हो । अमेरिकासँगको जितपछि टिम कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले अमेरिकासँगको जितले खेलाडीको मनोबल थप उच्च भएको बताए । ‘अमेरिकासँगको जितपछि खेलाडीको आत्मविश्वास थप बढेको छ । यद्यपि, हाम्रा केही कमजोरी छन् । आगामी म्याचमा सुधार गर्नुपर्छ,’ मल्लले भने ।
उनले कुशल, रोहित र विनोदको ब्याटिङको प्रशंसा गरे । ‘ब्याटिङमा कुशल, रोहित र विनोदको प्रदर्शन राम्रो रह्यो । उनीहरूको फिनिसिङ गज्जब थियो,’ कप्तान मल्लले भने ।
उनले ओमानविरुद्धको खेलमा पीचअनुसार प्लेइङ-११ चयन गरिने बताए । नेपालले आईसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत ओमानसँग आज खेल्दैछ ।
नेपाल र ओमानबीचको खेल पनि नेपाली समयअनुसार आज अपरान्ह ४ः१५ बजेदेखि सुरू हुनेछ ।
माघ १२ गते, २०७८ - ०९:०८
पशुपति धर्मशालाबाट बतास समुह आउट !
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन...
माघ ११ गते, २०७८ - १३:१३
सिमकोटमा दुईदिनदेखि रोकिएका सीता एयरका विमानद्वारा आजदेखि उडान सुरू
हुम्ला । हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा रोकिएका सीता एयरका दुई वटा विमानले आजदेखि उडान सुरू गरेका छन् । हिमपातका कारण सिमकोट विमानस्थलमा आइतबारदेखि रोकिए...
माघ १० गते, २०७८ - १५:०३
वर्षमान पुनले विमान चार्टर गरेको कुरा झुटो – कार्गो विमानमा नेपाल फर्किदै
काठमाडौं । लामो समयदेखि चीनमा उपचाररत नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन आज नेपाल फर्किंदैछन् । नेता पुन विमान चार्टर गरेर न...
माघ १० गते, २०७८ - १०:५१
के नाकबाट पानी बग्नु, खोकी लाग्नु ओमिक्रोनका लक्षण हुन ?
कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरिअन्ट ओमिक्रोन विश्वभरि द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ। मानिसहरू कस्ता लक्षणलाई लिएर सावधान हुनुपर्छ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यू...
माघ ९ गते, २०७८ - ०९:३६
बाँदर र सुँगुरमा परीक्षण सफल भएपछि मान्छेको दिमागमा चीप राखिदै !
यसअघि सुँगुर र बाँदरको दिमागमा चीप राखेर परीक्षण गरेको कम्पनीले अब मानिसमा पनि परीक्षण गर्ने बताइएको छ। विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कको दिमागक...
माघ १ गते, २०७८ - १०:२१
आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुन: श्रम स्वीकृति जारी हुने, कसरी लिने ?
वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुन: श्रम स्वीकृति दिने भएको छ । २०७७ पुसबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यम...
माघ १ गते, २०७८ - १०:१४
कोरोनाका कारण सुनसान बन्यो देवघाट
चितवन । विगतका वर्षहरुमा भक्तजनले भीडभाड हुने पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाम यस वर्ष सुनसान भएको छ । कोभिडका कारण स्थानीय प्रशासनले देवघाट प्रवेश गर्ने न...
माघ १ गते, २०७८ - ०९:२९
मौलिक पर्व नेपाली समाजको एकताको प्रतिक -प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विभिन्न समुदायका आफ्ना मौलिक पर्व नेपाली समाजको एकताको प्रतिकका रूपमा उभिएको ब...
माघ १ गते, २०७८ - ०९:१३
काेराेना उपचारमा सहयाेग गर्न माओवादीले बनायाे स्वास्थ टिम, कसरी सम्पर्क गर्ने ?
काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रले काेराेना महामारीले प्रभावित बनेकालाई आवश्यक सहयाेग गर्न आपतकालीन टिम गठन गरेकाे छ । काेराेनाकाे तेश्राे लहर आक्रा...
माघ १ गते, २०७८ - ०९:०६
तनहुँ दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ६ पुग्यो
तनहुँ। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–६ धरमपानी हटिया भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६ पुगेको छ। ज्यान गुमाउनेमा ९ महिने बालिका आरुबी थापा, २४ वर्...
क्रोएसिया जाने तयारीमा भारत गएका २२ वर्षीय युवा बेपत्ता
आहा रारा गोल्डकप : आजदेखि सेमिफाइनलका खेल हुँदै
भारतको ७३ औँ गणतन्त्र दिवस : राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको शुभकामना
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा २३ गैँडा गरे
एपिएफ फुटबल क्लब १४ वर्षपछि ‘आहा रारा गोल्डकप’को फाइनलमा
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित
मधेस प्रदेशमा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीकी उम्मेदवार अर्याल विजयी